स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षाको प्राथमिकता सहित स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्यो १० निर्णयहरु ! यस्ता छन निर्णयहरु ! – Public Health Concern(PHC)
काठमाडौं- सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षाका विषयमा १० बुँदे निर्णय गरेको छ। असार २३ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुुरक्षासम्बन्धी छलफले १० बुँदे निर्णय गरेको हो।
उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, दुई वटै मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य सरोकारवालाहरुको छलफलले १० बुँदे निर्णय गरेको हो।
स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षाका लागि समयानुकल ऐन तथा कानुन संशोधन गर्नेदेखि लिएर सुरक्षा निकायबाट तुरुन्तै सुरक्षा प्रदान गर्ने लगायतका निर्णयहरु भएका छन्।
यी हुन् १० बुँदे निर्णय
Tags: health infoJanaswaasthya SarokarMoHPMoHP CircularPublic Health Concernpublic health updateSwaasthya Mantraalaya